Ntughari: Alert System maka Nyocha Online | Martech Zone
Reputology: Alert System maka Nyocha Online
Tọzdee, Ọktoba 10, 2013 Tọzdee, Ọktoba 10, 2013 Douglas Karr
Anyị na-adịbeghị anya na-akọrọ anyị nyocha online na ndị ọzọ teknụzụ na-emetụta ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ. Ịntanetị ahụ is ngwa goto maka ikwado ulo oru ndi oru, ulo nri, na ndi ahia ndi ozo. Ntughari bụ nyocha nyochaa na ịkọ akụkọ. Ọ na-eziga ozi email mgbe ọ bụla mmadụ na-enyocha azụmahịa gị na Yelp, Google+ Local, Tripadvisor na saịtị nyocha ndị ọzọ. Site na ịzaghachi ngwa ngwa, ndị ahịa anyị nwere ike ịnweta onye nyocha na-enweghị obi ụtọ ịgbanwe obi ha 70% nke oge.
Ntughari Ntughari Email
Site na arụmọrụ arụmọrụ, Reputology na - eme ka ọ dị mfe ịchọpụta nsogbu ugboro ugboro site na ịchịkọta na nyochaa data gị. Ọ na-eziga akpaghị aka kwa izu / kwa ọnwa nchịkọta akụkọ, na ọ na-enye gị nchịkọta iji soro gị nyochaa arụmọrụ.
Zaghachi Ọsọ - Inweta oge-chebaara email alerts. Otu njikọ dị na email ahụ na - egosi gị ebe nyocha ahụ pụtara na mbụ.
Nyochaa ọtụtụ ebe - Ntughari usoro nke ndị ziri ezi & jiri nchịkọta akụkọ iji chọpụta nsogbu ndị metụtara azụmaahịa niile.
Sochie arụmọrụ gị - Nchịkọta nyocha na-eme ka ọ dị mfe nghọta ka usoro ọnụọgụ igodo na-agbanwe ma jiri ọnọdụ tụnyere.
Ụlọ ọrụ dị ka Ndepụta Angie (onye ahịa anyị) nwere amamọkwa yana ọbụlagodi iji nyere ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ aka ka ha wee gbakee n'okwu ndị ahịa… mana saịtị ndị ọzọ mepere emepe dị ka ndị jupụtara na nyocha adịgboroja (Gụọ: Ejiri ụlọ ọrụ 19 SEO akwụ ụgwọ na New York na nso nso a).
Debanye maka nyocha mata bụ ihe mbụ ị ga - eme iji zụta ma zaghachi mkpesa… adịgboroja ma ọ bụ nke dị adị!
Tags: Google+ ObodoNyocha banyere ntanetịreputologynyochaa anyanyochaa nyochaNyochakpugheereYelp
Kedu Teknụzụ na-emetụta Ebe Anyị Na-eri nri
Why Google Hiding Keywords dị mma maka ndị ahịa